Maamuusta Dugsiga Dhexe | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Shuruudaha meelaynta koorsooyinka sharafta leh
Saynis: Maamuus iyo Dardargelin
Xisaab la dedejiyey
Maamuusta Farshaxanka Luuqadda
Maamuusta Daraasaadka Bulshada
Si loo daboolo baahiyaha saynisyahannada curdanka ah, Minnetonka wuxuu bixiyaa labadaba saynis heer maamuus iyo isdaba-joog ah Saynis isku xigxiga.
U Qalmida Sharuudaha Meeleynta Sharafta Cilmiga 7 ama 8
Koorsada Sayniska Sharafta waxaa lagu bixiyaa fasalka 7aad iyo 8aad. Waxay siisaa ardayda dhiirigalin iyo aqoon sare leh khibrad saynis ah oo lagu dhisay nashaadaadyo iyo shaqooyin adag, wadahadal qoto dheer oo lala yeesho asxaabta iyo macallimiinta, maaddooyinka adag iyo rajooyinka sare.
maamuusa Koorsada sayniska
Maamuusta Sayniska 7 (Sayniska Nolosha) Si guul leh loo dhammeystiro Sayniska 6, ama ka sareeya boqolkiiba 90aad ee qiimeynta Sayniska NWEA, ama ka sarreeya boqolkiiba 90aad ee Xisaabta iyo Akhriska NWEA.
Maamuusta Sayniska 8 (Sayniska Dhulka) Ku guuleysiga dhameystirka Maamuusta Sayniska 7 ama waxqabadka gaarka ah ee Sayniska 7, iyo boqolkiiba 90th ee qiimeynta NWEA ee dhowaan iyo qiimeynta Akhriska
SHURUUDAHA SHAQAALAYNTA SHARCIYADA EE SAYNISKA LA XIRIIRAY
Nidaamkeena Dardargelinta Sayniska waa barnaamij saddex sano ah. Waxay ka bilaabaneysaa fasalka lixaad waxaana loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha kala duwan ee boqolkiiba shanta ugu sareysa ardayda sayniska. Astaantan ardaygu wuxuu leeyahay heer aqoon sare oo heer sare ah, si caadi ah ayuu u xiiseeyaa una jecel sayniska, wuxuuna awood u leeyahay inuu si dhakhso leh u fahmo una dabakho fikradaha sayniska. Si loo xoojiyo xirfadahan gaarka ah, isku xigxigayaga Sayniska wuxuu dabooli doonaa saddexda sano ee manhajka sayniska dugsiga dhexe (jirka, nolosha, dhulka) laba sano gudahood iyada oo la isbarbar dhigayo fikradaha lagama maarmaanka ah ee aag kasta oo muhiim ka ah. Manhajku wuxuu diiradda saari doonaa su'aalaha iyo barashada ku saleysan mashruuca waxaana ku jiri doona hordhaca kimistariga iyo fiisigiska (maaddooyinka, walxaha, iskudhafka, tamarta, hirarka, xoogagga, dhaqdhaqaaqa), bayoolajiga unugyada, noolaha nool, bey'ada, isku-dhafka dhulka iyo qaabdhismeedka, dhulka hydrosphere iyo jawiga iyo nidaamka qoraxda.
Kadib markay dhammeeyaan labada sano ee ugu horreysa isku xigxiga sayniska, ardaydu waxay qaadan doonaan koorso casri ah oo Applied Physics iyo Chemistry ah inta lagu jiro fasalkooda sideedaad. Koorsadani waxay xooga saari doontaa habka cilmi baarista iyo tijaabada iyadoo loo marayo baaritaan furan oo hagitaan ah. Manhajku wuxuu diiradda saari doonaa nuxurka iyo xirfadaha aasaasiga ah ee aasaaska u ah dugsiga sare ee AP Physics iyo AP Chemistry.
Koorsada sayniska ee la dedejiyay
Sayniska la dedejiyey 6 Taariikh ahaan, ku dhowaad 11% ee ardayda fasalka lixaad waxaa lagu meeleeyay Saynis Dardar leh.
Ardaydu waa inay keenaan ama ka saaraan 95 boqolkiiba guga fasalka 5aad Qiimaynta Sayniska NWEA ama waxqabadka aan caadiga ahayn ee qiimeynta Sayniska MCA ee fasalka 5aad, iyo ama ama ka badan boqolkiiba 95th ee qiimaynta NWEA Akhriska iyo Xisaabta dhowaan.
Sayniska la dedejiyey 7 (Sayniska Nolosha)
Si guul leh u dhammaystiray Sayniska la Dardargeliyay 6
Ama boqolkiiba 99th Guga fasalka 6aad Qiimaynta Sayniska NWEA iyo waxqabadka gaarka ah ee Sayniska 6, iyo boqolkiiba 95th ee qiimayntii NWEA Akhriska iyo Xisaabta ee dhowaan.
Sayniska la dedejiyey 8 (Fiisigiska la adeegsaday iyo Kimistariga)
Si guul leh ayaa loo dhammeystiray Sayniska la Dardargeliyay 7
Ama waxqabadka gaarka ah ee Sayniska 7 iyo boqolkiiba 99aad guga fasalka 7aad ee qiimeynta Sayniska NWEA, iyo boqolkiiba 95th ee dhowaan qiimeynta NWEA Akhriska iyo Xisaabta.
Ardayda Minnetonka waxay fursad u leeyihiin inay ku dardar geliyaan xisaabta inta lagu jiro dugsiga hoose ama dhexe. Dugsiyadeenna dhexe waxay bixiyaan saddex heer oo xisaab ah fasallada 6aad iyo 7aad iyo afar heer oo xisaab ah fasalka 8aad. Ardaydeena xisaabta ugu horumarsan waxay bilaabi karaan dugsiga dhexe ee Algebra waxayna ku sii socon doonaan Joometri iyo Sare Algebra ilaa fasalka 8aad, iyagoo aasaaska u dhigaya inay ku dhameystiraan AP Calculus AB iyo BC, iyo xitaa Calculus Multivariable ee dugsiga sare. Ardayda qaar waxay ka bilaabi doonaan Pre-Algebra waxayna ku sii socon doonaan Algebra iyo Joometri ilaa fasalka 8aad. Ardayda badankood waxay Aljebra ku dhammeeyaan fasalka 8aad.
Ardayda waxaa si taxaddar leh loo geliyaa heerarka xisaabta si loo hubiyo inay si habboon uga soo horjeedaan. Meelaynta waxaa lagu go'aamiyaa natiijooyinka qiimeynta caadiga ah ee ardayga iyo waxqabadka fasalka. Waxaan garwaaqsan nahay in ardaydu ay horumarin karaan hamigooda iyo xooggooda xagga xisaabta da 'kala duwan; sidaa darteed, waxaan ardayda siineynaa fursado ay ku galaan fasallada xisaabta ee horumarsan illaa dugsiga dhexe. Ardayda xogtooda qiimeynta iyo waxqabadka fasalka ay muujinayaan in meeleynta heer xisaabeed sare laga yaabo inay ku habboon tahay, waxaa jira laba fursadood oo lagu dardargelin karo manhajka: iyadoo la dhammaystirayo koorso waxbarasho oo madax bannaan iyo ka gudubka imtixaanka kama dambaysta ah, ardaydu waxay imtixaan ka qaadi karaan Pre-Algebra inta lagu jiro xagaaga kahor fasalka 6aad ama 7aad. Ardaydu waxay raaci karaan isla nidaamkan si ay u tijaabiyaan Joometri xagaaga kahor fasalka 9aad.
Ogsoonow: Ardaydu kama buuxin karaan Aljabra daraasad madaxbanaan maxaa yeelay fikradaha Algebra ayaa aasaas u ah dhammaan xisaabaadka horumarsan.
SHURUUDAHA AQOONSIGA SHARCIYADA
Pre-Algebra 6 Si joogto ah u dhaliyey ama ka sarreysa boqolkiiba 90aad qiimeynta Xisaabta NWEA
Taariikh ahaan, ku dhowaad 9% ardayda fasalka lixaad ayaa lagu meeleeyaa Algebra.
Si guul leh u dhammaystiray Xisaabtii Dardar-gashay ee fasalka 5-aad
Ama ardayda leh dhibcaha RIT ee 258 ama ka weyn guga NWEA Xisaabta guga waxay xaq u leeyihiin inay qaataan finalka-Algebra; ka dhali ugu yaraan 85% finalka Pre-Algebra (oo la qaaday bilaha Maajo ama Ogos)
Si guul leh oo dhameystir ah Pre-Algebra 6
Ama waxqabadka aan caadiga ahayn ee Xisaabta 6 iyo boqolkiiba 95aad gu'gii fasalka 6-aad qiimeynta NWEA Xisaabta iyo ugu yaraan 85% finalka Pre-Algebra ee bisha Ogosto
Joomatari 7 Si guul leh u dhammaystiray Aljabra 6 (B- ama ka sii wanaagsan)
Joomateri 8 Si guul leh u dhammaystiray Aljabra 7 (B- ama ka sii wanaagsan)
Aljabra sare 8 Geometry 7 oo si guul leh ku dhammaaday (B- ama ka sii wanaagsan)
Maamuusta farshaxanka luqadda ayaa la heli karaa laga bilaabo fasalka 6aad.
Koorsada Farshaxanka Luqadda
Maamuusta Farshaxanka Luuqadda 6 Taariikh ahaan, ku dhowaad 22% ardayda dhigata fasalka 6-aad ayaa lagu meeleeyaa Farshaxanka Luuqadda ee Maamuusta
2 ka mid ah 3dii NWEA ee ugu dambeysay ee buundooyinka Akhriska ee boqolkiiba boqol iyo 95 iyo dhibcaha tusaalaha ah ee qiimeynta qorista guud ee fasalka shanaad (oo la qaaday Maarso)
Maamuusta Fanka Luqadda 7
Si guul leh u dhammaystiray Maamuusta Fanka Luuqadda
Ama ardayda fasalka 6-aad oo leh 2 ka mid ah 3-dii ugu dambeysay ee NWEA Akhriska dhibcaha boqolkiiba 90 iyo dhibcaha tusaalaha ah ee qiimeynta qorista guud ee fasalka 6aad (oo la qaaday Maarso)
Maamuusta Farshaxanka Luuqadda 8
Si guul leh u dhammaystiray Maamuusta Fanka Luqadda 7
Ama ardayda fasalka 7-aad oo leh 2 ka mid ah 3-dii ugu dambeysay ee NWEA Akhriska dhibcaha boqolkiiba 90 iyo dhibcaha tusaalaha ah ee qiimeynta qorista guud ee fasalka toddobaad (oo la qaatay Maarso)
Fasalka 8aad, ardayda xiisaha u leh taariikhda waxay tixgelin karaan Daraasaadka Caalamiga ah ee 'Honors', oo u baahan qoto dheer oo aqoon iyo kakanaansho ah.
Maamuusta Daraasaadka Caalamiga 8
Ama waxqabadka gaarka ah ee Daraasaadka Bulshada, 1 ee 2 dhibcaha Akhriska (MCA ama NWEA) ee boqolkiiba 95th iyo waxqabadka gaarka ah ee Daraasadda Madaxa Bannaan ee Caalamiga ah
Shaqsiyan wax ubarasho ahaan, ardaydu waxay uqalmi karaan shaqooyinka koorsada ee kuxiran xiisaha iyo kartida. Ku dhiirigelinta ardayda inay waxbartaan wixii ka baxsan heerarka caadiga ah ee fasalka iyo shaqada fasalka waxay sare u qaadeysaa filashooyinkooda waxayna ku dhiirrigelineysaa inay heer sare gaadhaan.
Agaasimaha Barnaamijyada Waxbarashada Sare iyo Agaasimaha Qiimeynta, oo kaashanaya maamulayaasha iskuulka, ayaa go'aamiya meeleynta koorsada ardayda iyadoo lagu saleynayo heerarka soo socda:
Shuruudaha meelayntu waa macno:
Shuruudaha ayaa lagu aqoonsadaa ardayda iyadoo lagu saleynayo xirfadaha iyo aqoonta udub dhexaadka u ah guusha koorsada.
Shuruudaha meelayntu waa kuwo aan sharci ahayn:
Hal dhibic oo keliya “cut cut” kalidii kama reebayso ardayga kaqeybgalka. Waxa jira noocyo kala duwan oo arrimo kale la tixgelin karo.
Nidaamyada meelaynta waa loo siman yahay:
Ardayda waxaa lagu meeleeyaa isla shuruudaha iyadoo aan loo eegin iskuulka, macalinka ama u doodista waalidka.
Nidaamyada meelayntu waa hufan:
Nidaamku waa cad yahay, iskumid yahay, oo si fudud loo heli karo oo waalidku fahmi karo.
Agaasimaha Barnaamijyada Waxbarashada Sare iyo Agaasimaha Qiimeynta waxay falanqeeyaan xogta waxayna kugula talinayaan meeleynta ardayda dariiqyo badan:
Ardayda leh xog uruurinta shardiga / shuruudaha la dedejiyay waxaa si otomaatig ah loogu meeleeyaa koorso horumarsan. Marka laga reebo: Codsiga waalid ee sharaf-darada / meelaynta la dedejiyey waa la sharfay.
Ardayda xogta haysa ee ku dhow shuruudaha buuxinta waxaa lagu sameeyaa dib-u-eegis Faylal ah oo otomaatig ah. Degmadu waxay uruurisaa xogta la ballaariyey waxayna u dirtaa maamulaha iyadoo ay la socoto talooyin. Xogta la kordhiyay waxaa ku jiri kara taariikhda NWEA / MCA iyo taariikhda qiimeynta fasalka.
Meelaynta shaqaalaha dugsiga ayaa u wargaliya waalidiinta ka dib marka faallooyinka galka la dhammeeyo. Ka dib meelaynta la soo sheego bartamaha bisha Luulyo, su'aalaha waxaa loo jeedin karaa maamulaha dugsiga.
Ardayda lagu meeleeyay maamuus ama fasal la dedejiyay waxay fursad u helayaan inay ku sii wataan fasalka maamuuska - laga bilaabo rubuc illaa rubuc iyo sannad ilaa sannad - haddii ay si joogto ah u ilaalinayeen ugu yaraan celceliska B-rubuc kasta.
Abaalmarinta Madaxweynaha ee Hormarinta Waxbarashada
Abaalmarinta Madaxweynaha ee heer sare ee tacliinta ayaa lagu sharfaa ardayda fasalka 8-aad hanashada iyo dadaalka ay muujiyeen. Barnaamijku wuxuu siiyaa aqoonsi shaqsiyeed Madaxweynaha Mareykanka iyo Xoghayaha Waxbarashada Mareykanka ardaydaas dadaalkooda muuqda wuxuu u suurta geliyay inay la kulmaan heerar adag oo heer sare ah.
Si aad ugu qalanto, ardaydu waa inay buuxiyaan shuruudaha, oo ay kujiraan celceliska dhibcaha darajada iyo waxqabadka imtixaanada gobolka.
Celceliska dhibcaha dhibcaha: Ardaydu waa inay kasbadaan celcelis dhibco darajo ah 3.5 oo ah miisaanka 4.0. Marka la xisaabinayo celceliska dhibcaha dhibcaha, dhammaan sannadaha dugsiga dhexe waa in lagu daraa illaa simistarka dayrta ee fasalka 8aad.
Imtixaanada Gobolka iyo Imtixaanada Gaarka ah ee Heer Qaran ee Caadiga ah: Guul sare oo ah boqolkiiba 90 ama ka sareysa MCA ee akhriska ama xisaabta.
Ardayda kasbata Abaalmarinta Madaxweynaha ee Heerka Sare ee Waxbarashada waxaa lagu aqoonsadaa munaasabad quraac ah oo ka dhacda dugsigooda May. Waalidiinta waxaa lagu casuumay inay ka soo qeyb galaan.
La xiriir la-taliyahaaga hagidda dugsiga dhexe si aad ugala hadasho koorsooyinka sharfidda iyo meelaynta.
Fiidiyowga Kulanka Waalidka ee Meelaynta Ardayda
Dugsiga Dhexe (6-8) /